Nobodies: Puzzle-maitiro vhidhiyo mutambo unouya kuLinux | Linux Vakapindwa muropa
Mushure mekuburitswa munaGunyana 30, nyika yekutamba ine zita idzva. Iyo Nobodies vhidhiyo mutambo inosvika pamapuratifomu akasiyana, kusanganisira yako GNU / Linux kugovera futi. Kune avo vasingazvizive, iti icho chiitiko muPoint uye Dzvanya maitiro, akajairika mumitambo yakawanda yemavhidhiyo ePc uye nharembozha. Ine zvakawanda zvepuzzle zvaunofanira kugadzirisa.
Zvese izvi zve vhara matanho evamiriri vehurumende kuti ivo vari kuyedza kubvisa boka remagandanga. Basa rako nderekuvanza miviri, kuparadza humbowo, uye kusasiya chero chiratidzo chekuvapo kwavo. Iwe unofanirwa kuita zvese zvaunogona kudzivirira kuyedza kunotyisa kubva kuma50 nema60 kubva mukuwira mumaoko emagandanga ane ngozi nekuvashandisa zvakaipa. Chakavanzika chikuru chinokutungamira iwe kuti uite basa rese rakasviba kuhurumende yako. Pasina mubvunzo chiitiko chinonakidza chekuti mimwe mipiro mitsva inoiparadzanisa kubva kune vamwe uye inogona kuipa inonakidza kubata.
Nobodies inowanikwa kubva Steam uye zvakare for nhare mbozha dzakadai seIOS uye Android. Unogona kuona ruzivo rwese kubva ku nzvimbo yepamutemo kubva kumugadziri. Asi chokwadi ndechekuti kubva pane zvishoma izvo zvandakakwanisa kuongorora nezvazvo, basa rekumifananidzo rinoita serinonakidza, uye ndeimwe yemitambo yemavhidhiyo iyo, kunyangwe isingakusiire rusununguko rukuru, inopedzisira yakukochekera zvakanyanya nekuti vanokunyudza munyaya inonakidza yauchazoda kugadzirisa.
Mira panze mamwe maitiro ayoKufanana nehumhondi hwemhondi hwaunofanira kuvhara, uchifunga nekukurumidza uye nehungwaru kuviga humbowo. Iyo izere nemapuzzle aunofanirwa kugadzirisa mune yega yega mamishinari, kubva pamapuzzle kuenda kune mamwe marudzi emabasa. Kune nzira dzakawanda dzekugadzirisa dambudziko rega rega, uye kwete imwe chete semimwe mitambo yemavhidhiyo yesitayera. Uye zvechokwadi, izvo zvaakataura pamberi pekugadzira kwake graphic, kuti kunoitwa neruoko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Nobodies: mutambo wepuzzle unouya kuLinux
Ndatenda. Mutambo unotonhorera, muchiSpanish, iwe pakupedzisira unokurudzira mutambo uri muchiSpanish, yaive nguva uye 6 maurosi akadhura uye pamutengo iwoyo chinhu chinoshamisa ndechekuti ndiwo mutengo iwoyo, nekuti chokwadi ndechekuti mutambo wacho wakanyanya akanaka mune zvese.
Adobe ichadzorera vashandisi muVenezuela